VhuraSUSE pasi peiyo microscope | Kubva kuLinux
VhuraSUSE pasi peiyo microscope
Parizvino iri mu nzvimbo yechitanhatu kubva padanho reDrawrowatch, OpenSUSE iri kubuda sedistro yakakosha muLinux nyika, iine nharaunda yakakosha yevashandisi uye features rakanaka anoyevedza.
Inotsigirwa ne AMD neNovell, sisitimu yakavhurwa sosi uye inosanganisira nharaunda yese mukuvandudza kwacho. Panguva yatatove neiyo yekutanga beta yeshanduro 12.2 uye takamirira kuburitswa kwekupedzisira muna Chikunguru 11, 2012, isu tinoongorora yazvino vhezheni vhezheni yekugovera uku.
Inokurudzirwa kuverenga izvi pambiru kuti uone iwo makuru maficha eiyo yazvino vhezheni.
1 Kudhanilodha OpenSUSE
2 Kuisa gwara
3 Kuongorora yedu nyowani system
4 Shanduro dzekuvandudza
5 Zvimwe zvekuchengetedza
6 Chii chaunotarisira kubva OpenSUSE 12.2?
Pane peji rayo repamutemo tinogona kuwana diski mufananidzo wakagadzirira kurodha pasi, uchisarudza pakati pesarudzo dzinotevera:
4,7gb DVD, yakazara nezvakawanda zvekunze-kwe-mubhokisi software
GNOME Rarama CD
KDE Rarama CD
Sisitimu yekurodha uye epamhepo marekodhi (network).
Sarudzo dzese dzinogona kuwanikwa nekuburitsa, torrent, metalinks kana magirazi maseva, uye mune makumi matatu nematatu kana makumi matanhatu ezvivakwa. Isu tinopihwawo runyorwa rweOpenSUSE-based distros, marezinesi, manotsi ekuburitsa, uye magwara ekutanga, chimwe chinhu chakazara. Sokunge izvi zvaive zvisina kukwana, muchikamu chemagwaro tine raibhurari yakapfuma yemanyowani nezvekushandisa kwemidziyo uye zvikamu zvakasiyana, zviri muChirungu uye nenzira dzakasiyana (pdf, HTML, epub).
Dhawunirodha peji: http://software.opensuse.org/121/es
Zvigadzirwa zvekuburitsa peji: http://en.opensuse.org/Derivatives
Zvinyorwa uye zvinyorwa: http://doc.opensuse.org/
Kana chifananidzo changosarudzwa uye kurodha pasi, isu tichaenderera nekumisikidza, iri nyore chaizvo uye ine anotevera matanho:
1.- Kusarudzwa kwemitauro uye dhizaini yekhibhodi: isu tinofarira sarudzo yeSpanish mune zvese zviri zviviri
2.- Clock uye nguva yenguva: mune yangu chaiyo kesi ini ndinosarudza Buenos Aires, Argentina, uye nguva yacho inoonekwa otomatiki
3.- Desktop sarudzo: KDE, GNOME kana imwe. Sezvo ini ndiri kushandisa iyo GNOME Live CD sarudzo yangu ndeyeGNOME.
4.- Disk kupatsanura: default OpenSUSE inotsanangudza modhiyo yekuparadzanisa, kunyangwe kana tichida isu tinokwanisa kugadzirisa kumisikidzwa kwezvikamu. Zvinonakidza kuti kupatsanura kwekuparadzanisa kunopatsanura iyo / yekumba dhairekitori kubva kune yakasara sisitimu, chimwe chinhu chinonyanya kubatsira kana uchifanira kudzoreredza sisitimu kana kuigadzirisa kudzivirira kurasikirwa kweruzivo.
5.- Mushandisi mutsva: isu tinoshandisa ruzivo rwemushandisi rwatinozoshandisa pese patinopinda musystem yedu.
6.- Pfupiso: rinotevera hwindo rinotipa pfupiso yematanho ese apfuura ayo achagadziriswa panguva yekumisikidzwa. Kana isu tichida kuchinja yakasarudzika, tinogona kudzvanya pazita rayo.
Chinhu chinonakidza ndechekuti panguva yekumisikidza tinokwanisa kuverenga zvinyorwa zvekuburitsa, zvinonyanya kukurudzirwa kana tiri kutamira kune ino system kubva kune imwe distro. Iwo manotsi anokurumidza kuverenga uye anotipa tariso yakajairika yezvinhu zvehurongwa, senge iyo RPM package maneja.
Kuteedzera nhanho idzi, pachave nemashoma mashoma kunze uko kuiswa kwesystem yedu kwakaomarara. Kana wapedza, inguva yekuona maturusi atinawo.
Kuongorora yedu nyowani system
OpenSUSE inouya nezvimwe zvinhu izvo, pachezvangu, zvinondikumbira zvakanyanya uye zvinowedzera mashandiro uye kushandiswa.
YaST: Kugoverwa kwakawanda kunoisa pakati masisitimu avo munzvimbo imwechete kana "maneja". MuOpenSUSE isu tine YaST, chishandiso chine simba chinotipa kugona kugadzirisa ese "akaomarara" nzvimbo uye idzo dzisina kunyanya kutsoropodza. Iko kunyorera kuri nyore: pakutangisa inotibvunza isu password yemutungamiri (mushure mezvo haichazviiti zvakare kudzamara tavhara chirongwa) uyezve inoratidza iyo yakapusa hwindo umo isu takaunganidza zvese zvigadziriso zvinoshandiswa muzvikamu (Hardware, software, system, network zvishandiso, network masevhisi, chengetedzo uye vashandisi, kuona, vamwe). Ndinoisimbisa seyakanaka chishandiso nekuda kwekumhanya kwayo, kureruka uye panguva imwechete yayo akasiyana mapurogiramu; Ini ndinonyanya kurohwa nemapuratifomu ese mapurogiramu aanounganidza pamwechete, chimwe chinhu chandisati ndamboona mune mamwe ma distros, pamwe nemukana wekupa iyo "sudo" hunhu kana kuraira kubva kune yakapusa graphical chishandiso.
Zypper: iri nyore-kushandisa-rairo mutsara unoshanda, zvichibva pane raibhurari manejimendi manejimendi inonzi libzypp. Pakati pezvimwe zvinhu, zypper inobvumidza kugadzirisa zvinyorwa, kutsvaga, kuisa, kubvisa kana kugadzirisa mapakeji uye inogona kushandiswa yakazvimiririra kana kubva kumagwaro. Uye zvakare, inotsigira RPM, yum kana rmp-md uye mafomati eYaST2 (ayo anoshandiswa panguva yekumisikidzwa). Chimwe chakakosha ndechekuti iine "dema bhokisi" rinokutendera kuti utore zvese zvinoitika nhanho nhanho, uye zvinonyanya kubatsira kugadzirisa zvese zvikanganiso zvine chekuita nekutsamira kwepakeji uye nesystem system (solver kana solver muChirungu). by libzypp. Kuti ushandise iri bhokisi dema, unofanirwa kushandisa -debug-solver sarudzo pamwe neiyo 'gadza', 'bvisa', uye 'gadziridza' mirairo:
zypper gadza --debug-solver MozillaFirefox
Isu zvakare tine yepamutemo rubatsiro rweichi chinobatsira:
Zvinyorwa zvisinga tsanangurike: kana wanga uchiverenga chinyorwa ichi kubva pakutanga unozoona huwandu hwehukama hwandakawedzera. Izvi zviri nyore nekuti OpenSUSE ine zvinyorwa zvinogoneka, zvichibatsira kupindura chero mibvunzo inokosha inomuka uye ichiwedzera zvakanyanya kukosha kwesisitimu. Nharaunda ine zvakare yakakosha nhamba yenhengo, vanogara vakagadzirira kugadzirisa kusahadzika kana matambudziko edu. Mamwe akakosha rubatsiro uye mapeji ekushandisa ndeaya anotevera:
Saiti yemhepo yekurodha saiti saiti: http://gamestore.gk2.sk/
Peji kutsvaga mapakeji: http://software.opensuse.org/search
Main forum muSpanish: http://www.forosuse.org/
Kurerukirwa kwekushandisa: kana tangoziva mimwe mirairo uye zvinoshandiswa nesisitimu, hapana chikonzero chinokurumidza chekuverenga zvimwe zvidzidzo. Mune yangu nyaya, kutama kubva kuLinux Mint 13 (system yandinayo) ndakanga ndisina matambudziko makuru Iko kushandiswa kweYaST kwakanakisa, zypper inobatsira zvakanyanya uye iyo default software iyo OpenSUSE inouya inogutsa zvese zvakakosha mushandisi nzvimbo. Senge dai izvi zvaive zvisina kukwana, masevhisi anotakura nemazvo, mapulagi nemidziyo yekutamba uye zvese zvangu Hardware zvinozivikanwa pasina matambudziko nehurongwa uye iyo chete yekukanganisa hwindo randakatambira panguva ino raive rekunyora password yangu zvisirizvo. Kubata kwemadhisiki uye zvikamu zvakanaka kwazvo, sezvo madhiketi maviri akaoma andiri kushandisa haasi kuratidza chero matambudziko ekubatanidza, kana pakuiswa kana kuongorora kana kuteedzera / kugadzirisa mafaira ini andinowana pavari.
Kune mapurojekiti maviri anowedzera humwe hupfumi kune iyo yakatokura misiyano yatinowana mune SUSE nyika. Fekitori inomiririra iyo yazvino OpenSUSE kugovera, inosanganisira RCs (Inosunungura Vanokwikwidza) uye ine huwandu hwakawanda hwekuyedza software. Izvi zvinobatsira kune vanogadzira uye vashandisi vekuyedza, vanozozviwana vaine chikuva chinogara chichiitika icho chinoshandira kuisa hwaro hwekuburitswa kwakagadzikana mune ramangwana. Pasina mubvunzo kutaura, software inowanikwa muFekitori inowanzo kuve isina kugadzikana, saka vazhinji vedu taisazonzwa kugadzikana munzvimbo ino. Kugadzirisa izvi isu Tumbleweed, iyo vhezheni yekuenderera mberi yekuvandudza (Rolling Kuburitswa) nekutenda kwatinozove neazvino matsva akagadzika zvigadziriso zvakagadzirira zvezuva nezuva basa. Nenzira iyi, isu tinodzivirira kurodha pasi vhezheni nyowani dzeOpenSUSE, tichivimba nemapakeji azvino akatsiga.
Yambiro: Hazvikurudzirwi kushandisa Tumbleweed kana Fekitori kana iwe usinga zive kubata mapakeji nyore.
Tumbleweed zvinyorwa: http://download.opensuse.org/repositories/openSUSE:/Tumbleweed/standard/
Kune rimwe divi, maEvergreen edhisheni anoenderana neLTS kana shanduro dzenguva refu dzekutsigira, idzo dzinoitirwa kupa rutsigiro rwakawedzerwa kuburikidza nezvivakwa zvekuchengetedza pamwe nekuvandudzwa kwepakeji kwenguva yemakore matatu.
Kana isu tisati tave kugutsikana isu tinogona kuwedzera mamwe matura kuti tiwane yakanyanya kuwanda software inowanikwa.
Kuvawedzera isu tine nzira dzakawanda; Kana isu tine kero yepamhepo, isu tinotevera zvinotevera zvinotevera: YaST → Software Zvinyorwa → Wedzera → Tsanangura URL (yakatariswa nekukasira), uye wedzera iyo webhu kero yeiyo repository yatinoda. Isu tine dzimwe sarudzo, senge kuwedzera neFTP, DVD, USB uye nevamwe vazhinji. Ichi chirongwa chimwe chete chinotibvumidza kugadzirisa uye kudzima marekodhi atatove nawo.
YAMBIRO: Kuwedzera zvinyorwa zvinofanirwa kuitwa neruzivo nekutarisira, nekuti zvinogona kukonzera matambudziko akasiyana ehurongwa.
Centralised repositories: http://download.opensuse.org/repositories/
Zvimwe zvekuchengetedza zveYaST 11,3:
Software zvinyorwa. http://es.opensuse.org/Repositorios_de_software
Chii chaunotarisira kubva OpenSUSE 12.2?
Kunyangwe paive nematambudziko nekunonoka uye kukundikana mumaseva, iyo yekutanga beta yeshanduro 12.2 yave ichiwanikwa kurodha kubva munaJune 06. Inotevera Chikunguru 11, 2012 ichave iripo yekupedzisira vhezheni inowanika kune yakajairika mushandisi, ichitungamirwa neyakawanda bvunzo kuburitswa, kunyanya yakanangana nekuyedzwa kwenharaunda mune zvakajairika uye vanogadzira. Zvichienzaniswa neshanduro yazvino hatingowane shanduko dzinonyanya kukosha, asi isu tinonyora zvimwe zvinozivikanwa izvo zvinotevera zvinosanganisira:
KDE 4.8.2 nharaunda nekutadza, GNOME 3.4 sarudzo
LibreOffice yakagadziridzwa kuita vhezheni 3.5.2
Kubatanidzwa kwePlymouth bootsplash
GRUB 2 nekukasira, GRUB inosarudzika
Dhawunirodha OpenSUSE 12.2 Beta: http://software.opensuse.org/developer/es
Pakupedzisira, ini handioni chikonzero chevashandisi veLinux, novice kana ruzivo, kunyara kushandisa OpenSUSE kana zvasvika pakushanda. Ini pachangu, ndinofunga ndawana kugoverwa kwakatsiga, kwakachengeteka uye kwakakodzera kwekushandisa kwakasiyana siyana, iine kugona kukuru kwezvivakwa uye zvishongedzo zvinobatsira kwazvo kutsigira, kugadzirisa pamwe nekubatanidza software. Kurudziro inoenda kune vese avo vanoda system ine hunhu kana kudzidza chimwe chinhu chitsva, ivo havazozvidemba kushandisa OpenSUSE 😉
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » FileLet's UseLinux » VhuraSUSE pasi peiyo microscope
Ndinochida kuve nyore uye nemazhinji software.
Sezvo iwe zvataurwa ine yakawanda yeArch-maitiro zvinyorwa.
Ini ndinoda yakawanda Lmint kupfuura ivo zvavanofanirwa.
Kuti zvive nyore, kupfava uye kuzara kwazvo, izvo zvavanofanira kunge vachiremerwa, kukwana, vaine zvimwe (zvakasiyana) ruzivo.
Zvakare, svondo rino rinobuda, Lmint KDE 😀
Ehe, iyo poindi ndeyekuti ivo vakachinja zuva rimwe zuva mushure mekunyora chinyorwa icho chakaburitswawo nguva pfupi yadarika. Asi ndatenda nezano 😉
Ndanga ndichiishandisa nguva zhinji kubva munaKurume 2011, ndichitsvaga chinotsiva Mandriva, uye mhedzisiro yacho haigone kugutsa
Ehezve, kwandinoona kuti vanoshaya "customization" iri kunyanya muGNOME, asi zvese zvinoshanda.
Mushure memakore akati wandei ekuyedza kugovera kwese, ini ndakazopedzisira ndasarudza kunamatira neOverSUSE. Zvisinei, pane kukanganisa mune chinyorwa: iyo inotevera vhezheni haibude muna Chikunguru, yakamiswa kusvika… chete ivo vanogadzira vanoziva kuti riini asi zvinotarisirwa kwete pamberi paGunyana. Ini ndinokusiira iwe iyi link ine rumwe ruzivo. http://news.opensuse.org/2012/06/14/where-is-my-12-2-my-kingdom-for-a-12-2/
Pindura kuna Robs
kuvhuraSUSE pasina kupokana kugovera kwandakafarira zvakanyanya kusvika ikozvino. Ini ndaishandisa Ubuntu, nekuda kwekureruka kwekushandisa, asi nekubatana haina kundipa muchina. Zvese zvaindinonokera. Ndakaedza kuyedza Gnome 3 iine openSUSE, uye zviri kufamba zvakanaka. Uye sekutaura kwako ine yakawanda magwaro, pamusoro pekuve inowirirana neRPMs (kunyangwe zvisiri ese), izvo zvinoita kuti zvinhu zvive nyore kwauri.
Zvakanaka kuti iwe wakazvifarira, mumaonero angu Debian zvakare inomiririra yakanaka kwazvo imwe sarudzo senge OpenSUSE. Kwete pasina Linux Mint (imwe sisitimu yandinoda chaizvo) yakavakirwa paDebian neUbuntu
Icho chimwe chezvinyorwa zvine chinangwa uye zvinotsanangudza zvandakaverenga nezve OpenSUSE, mumaonero angu ndiko kugovera kwakakomba uye kwehunyanzvi kwezvose uye ndinozvitaura kubva kune yangu Debian musiti saiti. Makorokoto pachinyorwa ichi.
Zvinoita kuti ndide kuyedza nayo ne KDE
Ndatenda zvikuru nekuda kweichi posvo, ikozvino zvandiri kushandisa mamwe ma distros kazhinji (ubuntu uye nekutenda kuti ngatishandise linux sabayon ^. ^) Ndiri kufara kukurudzira Opensuse.
Iko hakuna nani distro yekutanga neinux pasirese nekuti zviri nyore sei kugadzirisa / kuisa chero uye mune zvinyorwa zvinouya ZVESE zvaunofanira kuziva kuti utange. Ini ndinodawo kusakwana kwayo mune yayo KDE vhezheni, ini ndinofunga ndiyo yakanakisa iriko mu KDE.
Pane maturusi maviri andinoda muLinux: Synaptic (muDebian uye zvigadzirwa) uye YaST, uyo akaedza haazondirega ndichinyepa ndichiti ivo vanoshamisa mukugona kwavo kuita system, ini ndinotovasarudza ivo pamusoro peiyo terminal. 😉
Ehezve, Opensuse inofanirwa kuyedzwa ne KDE hongu kana hongu, kwete nekuti mamwe madhesiki avo akashata, hapana chiri kumberi kubva kuchokwadi, asi nekuti ndiyo yakanyanya distro ne KDE pamusika (ndiregererewo kune avo vanoshandisa Arch, Mageia uye Chakra ).
Zvakare ndinokutendai zvikuru nezvakaiswa = D
DIGITAL PC, Internet uye Service akadaro
Tichatarisira kune yekupedzisira vhezheni, iri rakanakisa linux distro, ndinoifarira, yaive zvakare imwe yekutanga distros yandaishandisa / kuyedza pandakatanga munyika ino yepenguin.
Pindura DIGITAL PC, Internet uye Service
Yakanaka iwe, ini ndinoshandisa zvese uye zvakare Fedora 17, uye ese matatu anobatsira kwazvo very
Iyi distro inofanirwa kuuya neakavakirwa-mukati mairi maficha ... inogara ichipa matambudziko.
Achiri kugara senguva dzose uye achiri kushandisa iro tafura nyowani, ini handizvifarire. Ini ndinogara neMint 13 iri kutamba zvakanaka. 🙂
Ndanga ndichiishandisa kwemakore manomwe uye ndeimwe yeakanakisa andati ndamboedza, pamwe neMint.
Yangu June Desktop (Debian Kuyedza + KDE)
Chii chitsva muGnome 3.5.2 kana zvimwe zvakafanana?